Basic PHP - MYSTERY ZILLION
Basic PHP နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
XAMPP Control Pannel Application ကို run သည်ထိရပါတယ်...
နောက် browser မှာ localhost ရိုက်လိုက်တော့
You have successfully installed XAMPP on this system!....
DreamWeaver မှာ first.php ကို htdocs->mzedu အောက်မှာ သွားသိမ်းပါတယ် ... နောက် F12 နှိပ်ပြီး ကြည့်တော့
To preview pages containing sever-side code, you needatesting server.
လို့မေးပါတယ် ... cancel လုပ်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ Browser မှာ ဘာမှ မပေါ်ပါဘူး... နောက်တစ်ပုဒ် ဆက်လုပ်တော့လည်း echo တွေက ဒီတိုင်းပဲ ပေါ်နေပါတယ် ...
နောက် DreamWeaver မှာ first.php ကို htdocs->mzedu အောက်မှာ သွားသိမ်းပါတယ် ... နောက် F12 နှိပ်ပြီး ကြည့်တော့
To preview pages containing sever-side code, you needatesting server.Would you like to specify one now?
လို့ မေးပါတယ်... အဲဒီမှာ cancel လိုက်တော့ Browser ပွင့်လာပါတယ် ...ဒါပေမယ့် ဘာမှ မပေါ်ပါဘူး... နောက်တစ်ပုဒ် ဆက်လုပ်တော့လည်း echo တွေက ဒီတိုင်းပဲ ပေါ်နေပါတယ် ...
နောက်ပြီး Control Panel ကို နောက်တစ်ခါ ပြန်ဖွင့်ချင်ရင် ဘယ်ကနေသွားဖွင့်ရမယ် ဆိုတာလညး် သိချင်ပါတယ်...
F12 နဲ့ မrun ပါနဲ့။ F12 နဲ့ run မယ်ဆိုရင် dreamweaver မှာ site အရင်ထောင်မှ ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်ရိုးရိုးပဲ browser ကနေ http://localhost/mzedu/filename.php ဆိုပြီး ခေါ်ကြည့်ပါ။ filename.php က ကိုယ်ရေးထားတဲ့ filename ပါ။
ဆက်သင်ပါ့မယ်.....စောင့်ပါဦး ကိုစေတန် Edit လုပ်နေတယ်ထင်ပါတယ်....
အေးဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း မအားတာနဲ့ အစ်ကိုပို့ထားတာ မတင်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ iPhone keyboard ပြီးရင် ဆက်လုပ်ပါ့မယ်ဗျာ..
php cookie အကြောင်းလေးသိပါ့ရစေ